Health – Page5– aajnepal
के तपाइलाई पिसाब पोल्ने समस्या छ ? यसो गर्नुस !
February 12, 2019 aajnepal 0
पिसाव खुलेर नआउने वा कम आउनाले पिसाव पोल्ने गर्दछ । बिभिन्न यौनरोग हरुको संक्रमणबाट,कुनै विष वा कडा औषधिका कारण मृगौला वा पिसाव नलि वा पत्थरीका कारण पिसाव पोल्ने गर्दछ । पिसाव पोलेको रोकथामका लागि गरिने […]
दाद एक सरुवा रोग हो र यो सङ्क्रमित व्यक्ति अथवा जनावरसँगको लसपसबाट सर्दछ। केवल छालाको स्पर्शबाट मात्र नभएर यो रोग साझा कपडाको प्रयोग र जुठो खानाबाट पनि सर्दछ। सरुवा रोग र खतरनाक सङ्क्रमण भएकै कारणले […]
February 11, 2019 aajnepal 0
साना समस्यामा त्यति धेरै चासो नदिनु मानवीय स्वभाव हो । तर, सनाना–साना स्वास्थ्य समस्या पनि मुटु रोगका लक्षण हुन सक्छन् । जब मुटु र रक्तनलिले काम गर्न छोड्छ त्यसपछि शरिरका अन्य असम्बन्धित भागमा पनि यसको […]
एजेन्सी । यदी तपाई सुरक्षित सेक्स गर्नु हुँदैन भने अब तपाई जोखिममा पर्न सक्नु हुन्छ । अर्थात् एड्ससहित यौन रोगका अन्य जोखिमहरु त यसअघि बाटै थिए नै अब सेक्सकै कारण अर्को गम्भीर खतरा समेत विश्वमा […]
अण्डा खाएपछि संगसंगै केरा नखानुहोला…एकपटक अवश्य पढ्नुहोला
हिजोआज सोसियल मिडियामा एउटा पोष्ट भाइरल भएको छ । अण्डा र त्यसलगत्तै केरा सेवन गरिएको केही सेकेण्डमै भारतका एक व्यक्तिको मृत्यु भएपछि उक्त पोष्ट सोसियल मिडियामा एकाएक भाइरल बन्दै गएको छ । उक्त पोष्टलाई आधार […]
आज हामी तपाईहरुलाई महिनावारी भएको कति कति दिन पछि बच्चा बस्छ भने कुराको जानकारी दिदैछौ । पाठेघरमा बच्चा बस्न वा गर्भरहन थुप्रै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ। सन्तानको उत्पत्ति प्रमुख रूपमा पुरुषबाट निस्कने शुक्रकीट र स्त्रीमा विकसित […]
हिस्टेरिया यसरी हुन्छ
पाठेघर अर्थ भएको ग्रीक शब्द ‘हिस्टेरा’ बाट यो शब्द उत्पत्ति भएको हो । सुरुमा महिलामा मात्र यस रोग उत्पन्न हुन्छ भन्ने सिद्धान्तले यो रोगलाई हिस्टेरिया भनिएको थियो । १७ औँ शताब्दीतिर यो रोग पुरुषमा पनि हुने पत्ता लागिसकेको थियो । २० औँ शताब्दीका […]
राजेन्द्र भद्रा म ३० वर्षको भएँ । मेरो बच्चा भएको छैन । वीर्य एकदम पातलो निस्कन्छ । त्यही कारणले मेरो कुनै सन्तान नभएको हो कि ? कुनै व्यक्ति ३० वर्षको हुँदैमा बच्चाको पिता हुने होइन […]
February 10, 2019 aajnepal 0
प्याज भान्सामा नियमित तरकारी वा मसलाकोरुपमा प्रयोग हुने बस्तु हो । कतिपयलाई प्याज मन नपरेपनि अधिकाँशलाई यो मन पर्छ ।प्याज सामान्य देखिने बस्तु भएपनि यसका दर्जनौं फाइदा छन् । प्याजले रोगसँग लढ्ने क्षमता बढाउँछ भने […]
एक दिनमै अनुहार चम्काउने घरेलु सजिलो उपाय ! बनाउने बिधि सहित…(भिडियो सहित)
तपाइको छाला धेरैजसो सुख्खा तथा फिक्का देखिने गर्दछ । मरेको छालाको कारणले गर्दा यसो भएको हो छालालाई चम्किलो तथा नरम बनाउनको लागि तपाइंले प्राकृतिक […]